Dagaal Beeleedyo Saaka ka bilowdey Magaaladda Muqdisho - Awdinle Online
Dagaal Beeleedyo Saaka ka bilowdey Magaaladda Muqdisho
December 29, 2019 (AO) – warar dheetaad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya Ciidamo ka wada ka tirsan dowladda Federaalka oo Maanta ka dhacay Degmadda Hodan Taleex ee Xaafada Tarabuunka ee Gobolka Banaadir.
Dagaalkan dhexmaray Ciidamada ka wada tirsan dowladda oo u abaabulan qaab Beeleed ayaa salka ku haaya arimo la xiriira dhul ku yaala Xaafada Tarabuunka, waxaana labada dhinac ay isdhaafsadeen rasaas xoogan.
Dadka deegaanka oo la hadlay war fidiyeenka ayaa u sheegay in dagaalka uu ahaa mid socday mudo saacado ah, isla markaana hakad geliyay isku socodka dadka iyo ganacsigii halkaas jiray.
Waxaa lagu soo waramayaa in dagaalka uu geystay Khasaaro isug jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray Ciidamadii ku dagaalamay Xaafada Tarabuunka, In kastoo aan la si dhab ah loo xaqiijin.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda Federaalka oo ay uga hadlayaan dagaalkii ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan Tarabuunka.
Previous articleFalanqeyn ku Saabsan Sharciga Doorashada Cusub
Next articleQaraxyada Xamar Iyo Qiilka AMISOM maxaad ka taqaana Blackwater